URabindranath Tagore. Iminyaka engama-77 ngaphandle kweembongi ezidumileyo zaseIndiya. | Uncwadi lwangoku
Namhlanje ziyazaliseka 77 iminyaka Ukusweleka kukaRabindranath Tagore, ezona mbongi zidumileyo zaseIndiya. Ngokuqinisekileyo kumakhaya amaninzi kukho ushicilelo lwemisebenzi yakhe ayikhethileyo. Kweyam yeyona yaziwa kakhulu, yile Inqaku lomhleli (Ithala leNcwadi yeNobel Prize), kunye nohlobo lwe UZenobia Camprubi, Umfazi wembongi uJuan Ramón Jiménez.
Olu hlobo lolo hlobo, kunye ne-blue flexible paste, ephakanyisiwe iileta kunye negolide yegolide, yanditsala ukususela kumncinci kakhulu. Kwakungesinye sezizathu zokuthatha incwadi kunye nokufunda imibongo kaTagore nangona wayeqonda okuncinci. Namhlanje ndiyahlangula 4 yemibongo yakhe yothando ukukhumbula lo mbhali ophumelele Ibhaso likaNobel ngo-1913.
1 URabindranath Tagore
2 4 imibongo
2.1 Undixelele kancinci wathi: «Sithandwa sam, jonga emehlweni am.
2.2 Kubonakala kum, sithandwa sam, ukuba ngaphambi komhla wobomi ...
2.3 Ndixolele namhlanje ukungabi namonde, sithandwa sam ...
2.4 Ndithatha izandla zakho, nentliziyo yam, ndikukhangele ...
Uzalelwe ngaphakathi Calcuta Ngo-1861, ukongeza ekubeni yimbongi, noTagore wayenjalo sobulumko kunye nomzobi. Omncinci kubantakwabo abalishumi elinesine, wayengowakwa usapho olutyebileyo apho kwakukho imeko-bume enkulu yengqondo. Waya eNgilani eneminyaka elishumi elinesixhenxe ukugqiba imfundo yakhe, kodwa wabuyela eIndiya ngaphambi kokugqiba izifundo zakhe.
UTagore ubhale amabali, izincoko, amabali amafutshane, iincwadi zokuhamba kunye nemidlalo. Kodwa ngaphandle kwamathandabuzo udumo lwakhe lweza kuye ngobuhle obukhethekileyo bemibongo yakhe, awabeka kuyo umculo. Ibiyi umkhuseli wenkululeko yamaNdiya kwaye ngo-1913 wawongwa Ibhaso likaNobel kuNcwadi ekwamkeleni lonke ikhondo lomsebenzi wakhe kunye nokuzibandakanya kwakhe kwezopolitiko nakwezentlalo. Kwaye ngo-1915 wabizwa ngegama ICaballero nguKing George V. Kwiminyaka yokugqibela yobomi bakhe wazinikela ekupeyinteni.
Phakathi kwemveliso yakhe ebanzi Iingoma zokusa, ephefumlelwe ngamava athile ayimfihlakalo awayenawo; Umbutho wesizwe, isincoko sezopolitiko malunga nesimo sakhe sokuxhasa inkululeko yelizwe lakhe; Umnikelo weengoma, kwezona zaziwayo; Iposi kaKumkani, dlala. Okanye iincwadi zemibongo IGadi, iNyanga entsha o Imbacu.
Undixelele kancinci wathi: «Sithandwa sam, jonga emehlweni am.
Uthe kum ethambileyo: «Sithandwa sam, jonga emehlweni am.
"Ndamthethisa, ndimuncu, ndathi:" Hamba. " Kodwa ayizange imke.
Uye weza kum wandibamba izandla… ndamxelela: "Ndiyeke."
Kodwa ayizange imke.
Ubeke isidlele endlebeni. Nditsale kancinci
Ndamjonga ndathi "awunantloni?"
Kwaye ayizange ihambe. Imilebe yakhe yandibrasha esidleleni. Ndangcangcazela,
Ndathi, "Ungathini ukuthetha?" Kodwa wayengenazintloni.
Upeyinte intyatyambo ezinweleni zam. Ndathi, "Kulilize!"
Kodwa ayizukujika. Ususe igorha entanyeni yam, wemka.
Kwaye ndiyakhala kwaye ndiyakhala, kwaye ndibuza intliziyo yam:
"Kutheni, kutheni engabuyi?"
Kubonakala kum, sithandwa sam, ukuba ngaphambi komhla wobomi ...
Kubonakala kum, sithandwa sam, phambi komhla wobomi
Ubumi phantsi kwempompo yamaphupha amnandi,
ukugcwalisa igazi lakho ngengxwabangxwaba yolwelo.
Okanye mhlawumbi indlela yakho yayihamba ngomyezo woothixo,
kunye nobuninzi bejasmine, iinyibiba kunye ne-oleanders
wawela ezingalweni zakho njengeemfumba kwaye, wangena entliziyweni yakho,
kwabakho ingxokolo apho.
Ingoma yakho ingoma, amazwi ayo atshona
ngomsindo weengoma; Ukuxhwila ivumba leentyatyambo ezithile
musa ukunxiba; Kufana nokukhanya kwenyanga ukugqobhoza
Ngefestile yemilebe yomlomo wakho, xa inyanga ifihliwe
entliziyweni yakho. Andisafuni ezinye izizathu; Ndiyasilibala isizathu.
Ndiyazi nje ukuba ukuhleka kwakho sisidumo sobomi kwimvukelo.
Ndixolele namhlanje ukungabi namonde, sithandwa sam ...
Ndixolele namhlanje ukungabi namonde, sithandwa sam.
Yimvula yokuqala yasehlotyeni, negcume lomlambo
Uyavuya, kunye nemithi yekadam, ngokudubula,
Balinga imimoya edlulayo ngeiglasi zewayini enencasa.
Khangela, kuzo zonke iimbombo zezulu
Amehlo abo ayaqala, kwaye imimoya inyuka ngeenwele zakho.
Ndixolele namhlanje xa ndinikezela kuwe sithandwa sam. Yintoni nganye nganye
ngemini efihlwe kukungabikho kwemvula; yonke i
imisebenzi iyekile elalini; amadlelo anjalo
Ulahliwe. Ukuza kwemvula kufumene kuwe
Amehlo amnyama umculo wakhe, kunye noJulayi, emnyango wakho, linda, nge
ijasmine yeenwele zakho kwisiketi sakhe esiluhlaza.
Ndithatha izandla zakho, nentliziyo yam, ndikukhangele ...
Ndithatha izandla zakho, nentliziyo yam, ndikukhangele,
ukuba uhlala undibaleka emva kwamagama kunye nokuthula,
itshona ebumnyameni bamehlo akho.
Nangona kunjalo ndiyazi ukuba kufuneka ndonele kolu thando,
Ngento eza kungena kwaye ibaleke, kuba sifumene
Ngaba ndinamandla kangangokuba ndinokukuhambisa kule nto
i-swarm of worlds, ngokusebenzisa le labyrinth yeendlela?
Ngaba ndinako ukutya okukuxhasa ngokwendlela emnyama yokuzamla,
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Imibongo » URabindranath Tagore. Iminyaka engama-77 ngaphandle kweembongi ezidumileyo zaseIndiya.
Olona luhlu lubalaseleyo lusekwe ezincwadini